WASIIRKA DIMOQRAADIYEYNTA PUNTLAND OO DIIDAY DOODDII DIMOQRAADIYADDA & DOORASHADA DALKA – Radio Daljir
WASIIRKA DIMOQRAADIYEYNTA PUNTLAND OO DIIDAY DOODDII DIMOQRAADIYADDA & DOORASHADA DALKA
Nofeembar 1, 2021 8:15 g 0
Su’aaluhu waa badanyihiin, laakiin su’aal hore shacabka Puntland isu weydiiyeen baa ahayd “dimoqraadiyeynta Puntland iyo masuuliyiinta Puntland ee maanta isku meel ma u socdaan?” Waxay u egtahay in qayb jawaabta su’aashaas caawa la helay, waana wax aad looga xumaado in dawladda Puntland oo kahorimaaneysa dimoqraadiyadda curdanka ah ee ka hanaqaaday Puntland ay amar dood joojin ah dul-dhigtay Barnaamijka Madasha Daljir oo uu caawa marti ku ahaa Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashada Federaalka Mudane Maxamed Xasan Cirro. Madasha caawa ayaa daarneyd weelaynta doorashada dalka iyo kala warqaadasho waxa qabsoomay illaa iyo hadda.
Amar joojinta dawladda Puntland ayaa ahayd mid hadal ah oo ay masuuliyiin dawladda ahi kula hadleen maamulka warbaahinta Daljir iyo hawlwadeennadii barnaamijka Madasha, iyaga oo amray in la joojiyey barnaamijkaas madaleed oo marti aad u badani ka qaybgalaysay, ayna ku jireen wasiiro dawladda, mudanayaal baarlamaanka, madax heer gobol ah, kuwo degmo, ururada bulshada rayidka ah, aqoonyahanno iyo wax-ku-ool badan oo qaybaha bulshada Puntland ah.
Dawladda nooma ay sheegin Daljir ahaan asbaabta keentay joojinta Barnaamijka Madasha Daljir ee billaha ah, iyo sababta ku soo beegtay waxyar kahor xilligii bilaabashada barnaamijka, ayna fadhiyeen hoolka lagu qabanayey ee Hotel Martisoor ee magaalada Garoowe tiro badan oo kamid ah kaqaybgalayaashii Barnaamijka Madasha Daljir, ayna ku jireen wasiirro dawladda Puntland.
Muddo maalmo ah dawladdu way la socotay mawduuca Barnaamijka, martidiisa iyo macnaha ugu weyn ee lagu gorfaynayo oo ahaa doorashada dalka, horayna waan ula wadaagnay qabashada Barnaamijka, iyadoo madax kaladuwan oo hay’adaha dawladdu ay soodhaweeyeen, nagana aqbaleen kaqaybgalkiisa, mana jirin sabab keeni kartay amarka degdegsan ee dawladdu ku joojisay Barnaamijka Madasha Daljir ee caawa.
Warbaahin ahaan, tallaabadaasi dawladdu qaadday waxaan u aragnaa mid lagu degdegay, diidan dimoqraadiyeynta Puntland, xadgudubna ku ah xorriyadda hadalka iyo heerka madaxbannaani ee warbaahinta, wax sharciyad ahna aan loo cuskan, kuna fadhiyin.
Waxay u muuqataa xukuumadda Puntland in ay iskaga darsameen kaladuwanaantii siyaasadeed, middii aragtiyeed, iyo arrimihii masiiriga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed, ayna kamid tahay amaba ay ugu horrayso doorashada dalka, oo ah mid aan cid gaar ah qusayn, una danaynayn.
Tan su’aalaha shacabka, ha ahaadeen kuwo hore, kuwa caawa la isweydiinayo, iyo kuwa timaadaduba, jillaafooyinka dimoqraadiyeynta Puntland lala beegsanayo waa biloow, waana sii socon doonaan, laakiin feejignaanta shacabka iyo tan Ururada Siyaasadeedba waa xayndaabka koowad ee kahortagga jallaafooyinka ka dhanka ah dimoqraadiyenta curdanka ah ee Puntland, iyada oo laga feejignaanayo in waxa maanta aan aqbalno in berrina reer Puntland lagu xukumi doono.
Tan martida Barnaamijka Madasha Daljir ee caawa oo uu ugu horreeyo Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashada Md. Maxamed Xasan Cirro iyo ka qaybgalayaashaba, waan ka raalligelinaynaa qadafka dhacay ee ay Dawladda Puntland gaysatay, dhinaca kalena waxaan uga mahadcelinaynaa sidii qiimaha badnayd ee ay codsigayaga u aqbaleen, una soo ajiibeen.
Deni oo Xil ka qaadis ku sameeyay Taliyihii Booliiska Puntland